သစ်ပင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » သစ်ပင်	9
Posted by Kaung Kin Pyar on May 18, 2015 in Creative Writing, Drama, Essays.. |9comments
“သစ်တောနဲ့သစ်ပင် ချစ်ခင်တဲ့လူမျိုး၊ သစ်ပင်ကို နှစ်စဉ်စိုက်၊ ရွှေတိုက်ကိုစိုး”
ရွှေတိုက်တွေလဲ စိုးကုန်တဲ့သူတွေ စိုးကုန်ကြပြီ…
သစ်ကုမ္ပဏီမှာ လုပ်ခဲ့တုန်းက… သစ်ကွက်နင်းတာ၊ ကန်တော့ပွဲတင်တာက စလို့..ပြီးသွားပြီး ကောက်သင်းကောက်ထိ စာရင်းသွင်းခဲ့ဖူးလေတော့..ဘယ်သူဘယ်လောက်ရတယ် မှန်းမိပါတယ်…။
မားကတ်တင်းကိုကိုတွေများ အန်တာတေဘယ်လ်ထဲက အချိုးကျဘတ်ကီးပြတာတောင် ၆လ ၁နှစ်အတွင်း တိုက်ခန်းပစ်ဝယ်နိုင်ခဲ့ကြတာ..။ မှန်းသာကြည့်ပါတော့….
မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ရုံးသစ်ပြောင်းတုန်းက စပွန်ဆာပေးချင်နွန်းနို့ တန်းစီနေကြတာကလား….။ သူရို့ မျိုဖို့ကိုတောင် ခွံ့ကျွေးဖို့ တန်းစီကြသူတွေက မနည်း…။ သူရို့ကလဲ..ချေတာများ…….။ အိမ်သာထဲမှာတောင် အဲကွန်းတပ်ပေးရမတဲ့….
ထားပါတော့လေ.. ဒါ..သူတို့ကုသိုလ်နဲ့ သူတို့…
သစ်ပင်က ခုတ်တော့သာလွယ်တာ…စိုက်ပြီး အပင်ကြီးဖြစ်လာဖို့က ဆယ်စုနှစ်ချီပြီး ကြာတာ…..
ဆရာမဂျူးပြောသလိုပဲ…သစ်ပင်ဆိုတာ..ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကို ရှုပြီး အောက်ဆီဂျင်ကို ပြန်ထုတ်ပေးတဲ့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အဆုတ်တွေ တဲ့…။
လူတွေကလဲ…ခုတ်တုန်းကသာ အပင်ကောင်းတွေရှိတဲ့အကွက်ကောင်းတွေရဖို့ ပြူးပြဲဖားယားခဲ့ပြီး တောင်ကတုံးဖြစ်မှ အကုန်လောဘသတ်ကြတာ…။ မပြောတော့ပါဘူးလေ….ဒါလဲ သူတို့လောဘနဲ့ သူတို့ပါ….
လောဘဆိုလို့…အဲ့သစ်ကုမ္ပဏီမယ်…ဥက္ကဌက မှတ်သားလောက်စရာတွေ ပို့ချခဲ့ဖူးတယ်…
နောင်ဘ၀ကိစ္စ နောင်ဘ၀ရောက်မှ ရှင်းမယ် တဲ့…။ တရုတ်ကိုး….
အိုက်လိုတွေသာ ပြောနေတာ…။ ကျမရော အပင်စိုက်သလား မေးရင် နိုးပါ လို့ ဖြေရလိမ့်မယ်…။ ၅တန်းနှစ်က ကုက္ကိုလ်ပင်ပေါက်လေးစိုက်ပြီး သေသွားဖူးကတည်းက နောက်ထပ် အပင်ထပ်မစိုက်တော့….။
နောက်ပြီး ကျမက အပင်သေးသေး ပန်းပင်တွေထက်စာရင်.အရိပ်ရ အပင်ကြီးတွေကို ပိုသဘောကျတာ…။ အဲ…စိုက်ပြီး မြန်မြန်အပင်ကကြီးမလာရင် စိတ်ကမရှည်ဘူး…။ အဲ့ဒီအပင်လေးကြည့်ကြည့်ပြီး မြန်မြန် သူအပင်ကြီးဖြစ်လာဖို့ စောင့်နေရတဲ့ စိတ်ပင်ပန်းမှုကို မခံနိုင်….
ပြီးတော့ ကျမက သံယောဇဉ်လဲ ကြီးသေးတာ….။ ခုနေရာက ပြောင်းဖြစ်ရင်တောင်…ဒါငါ့အပင်ဆိုပြီး ခဏခဏလာကြည့်ဖြစ်ဦးမယ်…။ ဟိုမလွတ် ဒီမလွတ်လို့ အခုတ်ခံရရင်လဲ ကျမ စိတ်ထိခိုက် ဒေါသထွက်ရဦးမယ်….
ကိုယ့်အတွေးမှားနေတာတော့ သိပါရဲ့လေ…။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်လဲ လက်ခံထားတဲ့ ဆိုက်ကိုပဲ ထင့်…။
ကျမအကြိုက်ဆုံးအပင်ကို ပြောပါဆိုရင်တော့ ယုကလစ်ပင် နဲ့ စိန်ပန်းပင်ဖြစ်မှာပဲ….
ယူကလစ်ကို ကျမ ချစ်တယ်…။
သူတို့ကို ကြည့်လိုက်ရင် ဖြူနွဲ့နွဲ့နဲ့ ခပ်တောင့်တောင့်ကြီးရယ်…..
ငယ်စဉ် ရှမ်းပြည်မှာနေခဲ့တုန်းက ယူကလစ်နံ့ရနေတဲ့ လေကိုရှုခဲ့ရတာ။ အဲ့အနံ့တွေက ခုချိန်ထိ ကျမကို လွှမ်းမိုးတုန်း…။ သူ့အနံ့က အရွက်ကိုခြေလိုက်ပြီးမှ ထွက်လာတာပေမယ့်…အပင်တွေသိပ်များတဲ့ကြားရောက်နေတော့လဲ အဲ့ခေါင်းမူးပျောက်စရာ ခပ်သင်းသင်းအနံ့က သူ့အလိုလိုရလာသလိုလို….
စိန်ပန်းပင်တွေကတော့…သူ့ကိုင်းဖြာပုံတွေ အပွင့်ရဲရဲတွေကို ကြည့်ရင်း ချစ်မိတာပဲ…။ အကိုင်းက ခပ်ကားကားနဲ့ ပန်းတွေပေါ်နင်းပြီး နောက်ထပ်ပန်းတွေက ကိုယ့်အပေါ်က အုပ်မိုးထားသလို ခံစားမှုကို သဘောကျတယ်…။
ခု မိုးစ ကျလာပြီ…
ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အဆုတ်ကို ကျမ သဲတစ်ပွင့်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်…အထောက်အပံ့ပေးချင်စိတ် ပေါ်မိတယ်..…..
ကျမ အပင်တွေစိုက်ဦးမှပါ..…။ သူတို့ ဆက်ရှင်သန်နိုင်လောက်တဲ့သေချာမှုတစ်ခုရတဲ့အထိတော့ ကျမ ဂရုစိုက်ပေးရမှာပေါ့….
အဲ့ဒီအပင်တွေက ရှင်လာသည်ဖြစ်စေ…အကြောင်းကြောင်းကြောင့် သေသွားသည်ဖြစ်စေ…..၊ မတော်တဆ အခုတ်ခံလိုက်ရသည်ဖြစ်စေ.. ဒါ သူ့ကံပဲ…။
အဓိကက ကျမ အပင်စိုက်လိုက်ပြီး…ကိုယ့်ဘက်က အတတ်နိုင်ဆုံး ဂရုစိုက်ပေးဖို့ပဲ…။
ရွာသူားတွေလဲ အဆင်ပြေရင်ဖြင့် အပင်တစ်ပင်လောက်တော့ စိုက်ကြရအောင်ပါ…..
Ma Ma says: အပင်စိုက်ရတာ ၀ါသနာပါတယ်။
အရိပ်ရပင် နှစ်ရှည်ပင် အပင်ကြီးတွေရော၊ ပန်းပင်းတွေရော၊ သီးပင်စားပင်တွေရော ဘာမဆို အကုန်စိုက်ချင်တယ်။
အဲ…. လွတ်လွတ်လပ်လပ် စိုက်နိုင်မယ့် နေရာလေးပဲ မရှိတာ။
အရိပ်ရပင်မို့ လမ်းဘေးသွားစိုက်ထားတာ အရိပ်မရသေးခင် စည်ပင်နဲ့တွေ့သွားတယ်။
ပိတောက်ပင် လမ်းဘေးစိုက်ထားတာ ပိတောက်ပွင့်တော့ ကိုင်းတွေ လာချိုးကြတာ အပင်ကိုတောင် သနားမိတယ်။
နာဂစ်မှာ အဲ့ဒီအပင်ကြီး လဲသွားတော့ ပြန်မစိုက်ဖြစ်တော့ဘူး။
သီးပင်စားပင်ဆိုပြီး အလွယ်တကူရအောင် အိမ်ရှေ့မှာ စပါးလင်ပင်းစိုက်တာ အုံလိုက်ကြီး ဆွဲနှုတ်သွားတယ်။
မပြုစုတတ်တော့ ၀ယ်တုန်းကပါလာတဲ့အပွင့်ပြီးရင်…….. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12395
ခင်ဇော် says: ရာသီဥတုတွေ အရမ်းပူတယ်လို့ ကြားနေရတာ စိတ်ညစ်စရာပဲ။၊
နိုင်ငံမှာ သစ်တောခုတ်ရောင်းမှုကြောင့် နည်းတာ အပြင်…
သဘာဝဘေးဒဏ်ကြောင့် သစ်ပင်တွေ ရှားပါးလာတာကလည်း ရာသီအပူကို လျှော့ချပေးမဲ့ အကူတွေ မရှိတော့သလိုမျိုးပဲ။
စဉ်းစားကြည့်မိတာ တစ်အိမ်ကို သစ်ပင်ကြီး ၂ ပင်လောက်ပဲ ကြိုးစားစိုက်ကြည့်ဦးးး နောင်လာမဲ့ ၁၀ သက်တန်းအတွင်းမှာ မြို့တစ်မြို့အတွက် စိမ်းလန်းတဲ့ အပူဒဏ်ကာကွယ်တဲ့ ပတ်ဝန်းလေးလေး ဖန်တီးနိုင်မလားမသိဘူး။
အဲလိုတွေးမိပြီးမှ လူတိုင်း လူတိုင်းး စားဝတ်နေရေးအတွက် လိုအပ်တာထက်ရုန်းကန်နေရရင်၊
အချိန်ကို ပိုက်ဆံမဟားဒယား ရှာဖို့ အတွက်ပဲ သုံးနေရရင် သစ်ပင်စိုက်ချိန် ဘယ်ရှိပါ့မလဲနော်။
ကြွေလွင့် ပန်း says: ကျွန်တော်လဲ ဒီမှာ ထင်းရှူးပင်ရယ် ချယ်ရီပင်ရယ် ရသလောက် စိုက်မယ် စိတ်ကူးပါတယ်
ရှင်တာ မရှင်တာတော့ သူတို့အပိုင်းပေါ့လေ။
Alinsett @ Maung Thura says: ကျနော် အကြိုက်ဆုံးသစ်ပင်ကတော့ ပိတောက်ပင်နဲ့ စိန်ပန်းပင်တွေ. . .
ခရေပင်ကိုလည်း သဘောကျတာပဲ. . .
ကျနော်တို့ စားသုံးရသည်ဖြစ်စေ မစားသုံးရဘူးဖြစ်စေ
သစ်ပင်တွေ စိုက်ပျိုးပေးထားရစ်တဲ့ မျိုးဆက် ဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့။
.နောင်လာနောင်သားတွေအတွက် အခုထက်ပိုကောင်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို
တယောက်တလက် ဖန်တီးပေးခဲ့နိုင်တဲ့မျိုးဆက် ဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်
သစ်ပင်တွေ ခုတ် ရောင်းပြီး ကိုယ်ကျိုးတခုသာ ကြည့်သော မ်ျုးဆက် ဖြစ်နေရင်
သမိုင်းမှာ ရိုင်းတဲ့မျိုးဆက် ဖြစ်သွားမှာပဲ. . .
Ma Ei says: ခြံရှေ့မှာ ခရေ၊ ငုဝါ စိုက်ထားတယ်…
ဓာတ်ကြိုးနဲ့ မလွတ်လို့ ခုတ်ခံထိတာ အခါခါ
အကိုင်းခက်တွေရှင်းရင် အမှိုက်ပုံမှာပစ်လို့ မရဘူးတဲ့…
သီးသန့် အမှိုက်ကားခေါ်ရင် …တစ်စီး ဘယ်လောက်တဲ့…
ဒီတော့ အမှိုက်ပစ်မလား ဆိုတဲ့ လှည်းနဲ့ ညှိလို့ ပစ်ရပေါင်းများပြီ…
ဒါပေသိလည်း… အပင်လေးတွေတော့ ဆက်ထားမြဲပါ..
သစ်ပင်ကို ချစ်ခင်ခဲ့မိတာကိုး..
Mike says: .အိမ်မှာတော့စိုက်စရာမြေမရှိလို့ စက်ရုံမှာတော့နှစ်တိုင်းစိုက်ဖြစ်တယ်…ပိတောက်နဲ့ ခရေပင်တွေပါပဲ
တောင်ပေါ်သား says: မန်း – ဗန်းမော်လမ်း မြစ်ကြီးနား – ဗန်းမော်လမ်းတွေမှာ တောင်ကတုံးတွေက တစ်မျှော်တစ်ခေါ်
ကျွန်း တမလန်းတွေကုန်လို့ အခု အင် ကညင်ပါ မချန်တော့ပါ
Wow says: အိမ်တွင်းစိုက်တဲ့ အပင်လေးတွေတော့ ၀ါသနာပါတယ်.. စိုက်ကျိကောင်းမား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 997
kotun winlatt says: အပင်တွေကို ပြန်စိုက်သင့်ပါပြီ
ကျနော်တို့ဘက်မှာတော့ အခုထိ လက်ကျန်ကျွန်းပင်ကြီးငယ် အပြတ်ရှင်း အပြောင်ရှင်းနေကြတုန်းးးးး